Ahoana ny fihainoana mozika amin'ny famantaranandro maranitra (Android, Apple ary ny hafa) ulator Emulator.online ▷ 🥇
Rehefa manapa-kevitra ny hividy smartwatch ianao dia tokony hanombatombana ihany koa fampiasa amin'ny resaka playback mozika- Hiasa fotsiny ho toy ny karazana fanaraha-maso lavitra ho an'ny finday avo lenta findainao ve izany sa tena afaka mozika mikoriana ary ampifanaraho hira mba hahafahanao mihaino azy ireo na aiza na aiza?
Miaraka amin'izany fampiharana mozika maro samihafa ary ny sehatra streaming misy eny an-tsena, ny valin'ity fanontaniana ity dia mety ho kely kokoa noho ny noeritreretinao, indrindra fa tsy azo atao ny mampandeha ny serivisy mozika voafantina miaraka amin'ny fitaovana napetraka ao amin'ny smartwatch. Ho hitantsika, ankoatry ny zavatra hafa, ao amin'ireto andalana manaraka ireto fa, raha ny tena izy, ny fanampiana tsara indrindra amin'ny famerenana mozika ivelan'ny Internet dia tsy avy amin'ireo famantaranandro marani-tsaina namboarin'i Apple sy Google.
Ity ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao ho fantatra fahaizan'ny famantaranandro marani-tsaina hilalao mozika na amin'ny telefaoninao na amin'ny tsy miankina.
VAKIO IZAO: Fandaharam-potoana tsara indrindra: Android, Apple ary ny hafa
Amin'ny maha-mpitarika tsena azy amin'ny smartwatches, tsy mahagaga raha nyApple fiambenana atolory ny mpampiasa ny safidy betsaka indrindra amin'ny fihainoana mozika sy karazana audio hafa; Apple Music Raha ny marina, io no safidy mazava indrindra: ny fampiharana dia ahafahanao mifehy ny mozika alefa amin'ny telefaonanao mivantana avy eo amin'ny tananao na mandefa hira mivantana any amin'ny Apple Watch amin'ny fihainoana azy amin'ny alàlan'ny headphones. Bluetooth.
Amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny Apple Music dia azonao atao ny mandefa azy ny hira rehetra ao amin'ny katalaogy na henoy izay rehetra novidiana nomerika tamin'ny Internet.
Raha mifanaraka amin'ny famantaranandro voafantina ny serivisy dia azo alefa mivantana amin'ny Apple Watch amin'ny alalàn'ny alàlan'ny mozika Wifi O LTE; Ary koa, raha lavitra ny fifandraisana Internet ianao ary te handao ny findainao any an-trano dia azonao atao ny mampifangaro ireo hira amin'ny Apple Watch mialoha amin'ny alàlan'ny fandehananao Ny famantaranandroko eo amin'ny fampiharana Apple Watch amin'ny findainao finday, avy eo amin'ny mozika mi Manampia mozika. Ny fampifanarahana dia tsy mandeha afa-tsy amin'nyApple fiambenana no miandraikitra.
ihany koa Spotify manana fampiharana natokana ho an'nyApple fiambenana izay azo ampiasaina handefasana mozika mivantana amin'ny tananao na hifehezana ny filalaovana amin'ny fitaovana hafa. Fanampin'izay, noho ny fanavaozana vao tsy ela akory izay, dia miasa amin'ny fitaovana finday sy Wi-Fi ihany koa izy ankehitriny, ahafahanao mivoaka tsy misy telefaona anao.
Na izany aza, ilaina ny loharanom-pifandraisana data ary mbola tsy azo atao ny mampifangaro ny playlist amin'ny famantaranandro mba hihainoana ivelan'ny Internet.
Avy eo misy fampiharana, Youtube Music, natokana ho an'ny Apple Watch, saingy nampiasaina hizaha ny fitehirizam-bokinao sy hifehezana ny playback amin'ny fitaovana hafa fotsiny. Fomba fiasa mitovy amin'izany no hita ao amin'ny fampiharana Deezer nataon'i Apple Watc.
Rafitra fiasan'ny Google Wear
Ny sehatra smartwatch an'ny Google mbola tsy nampiharinao ny fanohanana feno fampifangaroana Youtube Music izany, rehefa dinihina ny zava-misy Google Play Music nesorina, hafahafa be. Na izany aza, azo atao ny mampiasa Mampiasà OS hifehezana ny fiasa fototra an'ny Youtube Music amin'ny findainao.
Ny etsy ambony dia mihatra amin'ny ankamaroan'ny serivisy mozika - tsy misy fampiharana Mampiasà OS natokana ho an'ny serivisy natolotra, ohatra, ho an'ny Apple Watch, noho izany dia tsy misy fampifanarahana playlist.
Ny fanaraha-maso playback dia hiseho amin'ny smartwatch anao isaky ny fitaovana Android milalao atiny haino aman-jery amin'ny alàlan'ny fampiharana sy amin'ny alàlan'ny mpilalao podcast, fa mihoatra ny fanombohana sy ny fampiatoana ny playback, tsy dia betsaka ny azonao atao ary mbola ilaina foana ny mitondra ny smartphone anao.
Ny serivisy mozika tokana misy rindrambaiko mifanaraka aminy Mampiasà OS es Spotify Na dia tsy manome endri-javatra maro hafa noho ny azonao avy amin'ny fampidirana mahazatra aza Android amin'ny Mampiasà OS: Azonao atao ny manampy ny mozika amin'ny tranombokinao ary miova eo anelanelan'ny fitaovana playback, fa tsy afaka mandefa mozika mivantana amin'ny famantarananao ianao ary tsy afaka mandrindra làlana ho an'ny fihainoana ivelan'ny Internet.
Milalao hira amin'ny famantaranandro marani-tsaina Mampiasà OS tsy mila telefaona koa, nySafidy tsara kokoa dia ny fampiharana NavMusic izay manome a fe-potoana fitsapana maimaimpoana aorian'izany dia mandoa ianao: rindranasa kely mifototra amin'ny famindrana ireo rakitra eo an-toerana amin'ny famantaranandronao, ka ahazoana ny mozika tadiavina amin'ny endrika nomerika.
Fitbit, Samsung ary Garmin
Bara tsirairay an'ny Fitbit su Versa Lite mamela anao hifehy mozika rehefa milalao amin'ny smartphone mifandraika amin'izany, amin'ny alàlan'ny misy fampiharana misafidy ny hampiasa. Amin'ny fiambenana afa-tsy i Versa Lite sy ilay Sense vaovao ary ny Versa 3, mifantoka bebe kokoa amin'ny serivisy rahona, azonao atao ny mampifanaraka ireo dian-dizitaly azo tamin'ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny fampiharana Fitbit Connect.
Amin'ity tranga ity koa Spotify manokana fampiharana manokana ho an'ny famantaranandro marani-tsaina Fitbit, fa indray mandeha fotsiny dia mamela anao hifehy ny playback amin'ny fitaovana hafa ianao: raha ny marina dia tsy azo atao ny mampifangaro ny playlist amin'ny famataranandro. Ireo rindranasa mamela anao hanao an'izany, amin'ny fitaovana rehetra. afa-tsy Versa Lite, Izaho dia Deezer mi Pandora. Te hihaino ny mozikany, noho izany Fitbit Tsy mila mampiasa telefaona findainao ianao dia mila mampiasa iray amin'ireo serivisy mivantana na mandika rakitra mozika dizitaly, araka ny nohazavaina etsy ambony.
Mikasika ny andiany Samsung Galaxy Watch, manomboka ny fampiharana mozika mariho fa azo atao ny mifamadika amin'ny fanaraha-maso ny famerenana mozika amin'ny telefaona mankany amin'ilay an'ny famantaranandro: raha hihaino mozika ivelan'ny Internet ianao dia azonao atao ny mampifangaro ireo làlana dizitaly amin'ny famantaranandro marani-tsaina na mampihetsika ny fampiharana Spotify natokana sy amin'ny kinova voalohany mamela anao handrindra ny playlists amin'ny famantaranandro marani-tsaina.
Farany, ny karazana famantaranandro marani-tsaina Garmin manana safidy famerenana mozika mitovy amin'ireo Samsung: Azonao atao ny mampiasa an'ireto famantaranandro ireto mba hifehezana ny famerenana amin'ny laoniny ny ankamaroan'ny rindran-kira amin'ny telefaoninao na ny fitendrena mozika niomerika niraikitra tamin'ny alàlan'ny solo-sainao Garmin Connect, mamela anao handao ny findainao ao an-trano.
Ny serivisy mozika tokana mifanentana amina fampiharana natoraly mitovy amin'ireo entina entina entina dia Spotify ary, toy ny amin'ny fitaovana Samsung, mpamandrika amin'ny Spotify Premium azon'izy ireo atao ny mampifandray ny playlist amin'ny fitaovana Garmin mba hihainoana azy ireo na aiza na aiza.
VAKIO IZAO: Smartwatch izay hividy amin'ny 2021